Guillain Barre Syndrome (ကြွက်သားအားနည်းပျော့ခွေသော ရောဂါစု) - Hello Sayarwon
Guillain Barre Syndrome (ကြွက်သားအားနည်းပျော့ခွေသော ရောဂါစု)
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Guillain Barre Syndrome (ကြွက်သားအားနည်းပျော့ခွေသော ရောဂါစု)
Guillain Barre Syndrome (ကြွက်သားအားနည်းပျော့ခွေသော ရောဂါစု) ကဘာလဲ။
Guillainbarre syndromeဆိုသည်မှာရှားပါးသောရောဂါတစ်မျိုးဖြစ်ပါသည်။ Guillainbarre syndrome သည်ပင်မမဟုတ်သည့် ဘေးပတ်လည်အာရုံကြောအဖွဲ့အစည်း၏ အစိတ်အပိုင်းများကိုတိုက်ခိုက်သောကိုယ်ခံအားစနစ်ကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
ဤရောဂါသည် သေချာမကုသပါကအာရုံကြောများကိုရောင်ရမ်းစေပြီး ကြွက်သားများအားလျော့ခြင်း နှင့် အကြောသေခြင်းတို့ကို ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
Guillain Barre Syndrome (ကြွက်သားအားနည်းပျော့ခွေသော ရောဂါစု) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
ခန္ဓါကိုယ်ကြွက်သားများအားနည်းခြင်း၊ ယားယံခြင်းတို့ပါဝင်သည့် ရောဂါလက္ခဏာများသည် လျင်မြန်စွာပေါ်ပေါက်လာပြီး ခန္ဓါကိုယ်အပေါ်ပိုင်းသို့မဟုတ် လက်မောင်များဘက်ဆီသို့ ပျံ့နှံ့သွားပါသည်။ အဖြစ်များသည့် ရောဂါလက္ခဏာများမှာ
ခြေ နှင့် လက် တုံ့ပြန်မှုများဆုံးရှုံးခြင်း
ခြေ နှင့် လက် တွင် ယားယံခြင်းအားပျော့ခြင်း
အမြင်ဝေဝါးခြင်းသို့မဟုတ် နှစ်ထပ် မြင်ရခြင်း
အထက်တွင်ဖော်ပြမထားသောအခြားလက္ခဏာများလည်းရှိနိုင်ပါသည်။ အကယ်၍ သင့်ဆီတွင် ရောဂါလက္ခဏာတစ်ခုခုများရှိနေသည်ဟုစိုးရိမ်မိပါက ဆရာဝန်နဲ့ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်သင့်ပါသည်။
အောက်ပါတို့တွေ့ရှိရပါကသင်၏ ဆရာဝန်နှင့် ဆက်သွယ်ပါ။ လက်နှင့်ခြေတွင် ယားယံခြင်းများခံစားရပြီးအခြားနေရာများသို့ ပျံ့နှံ့ သွားသည်ဟုခံစားရပါသည်။ ကြွက်သားများအားနည်းခြင်း နှင့် အသက်ရှူရခက်ခဲခြင်းစသောရောဂါလက္ခဏာများတွေ့ရှိရပါကဆရာဝန် နှင့် ပြသပါ။
ဤရောဂါသည် အလျင်အမြန်ဆေးရုံတင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ရောဂါလက္ခဏာများသည် လျင်မြန်စွာ ပြင်းထန် လာနိုင်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ လူတိုင်း၏ ခန္ဓါကိုယ်တုံ့ပြန်မှုသည် မတူညီနိုင်ပါ။ ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်းသည် သင်၏အခြေအနေကောင်းမွန်ရန်အတွက် အကောင်းဆုံး ဖြစ်ပါသည်။
Guillain Barre Syndrome (ကြွက်သားအားနည်းပျော့ခွေသော ရောဂါစု) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
ဖြစ်ပွားရသည့် တိကျသောအကြောင်းရင်းကိုမသိရှိကြသေးပါ။ ဤရောဂါသည် အသက်ရှူ လမ်းကြောင်း နှင့် အစာခြေလမ်းကြောင်းတို့တွင် ရောဂါကူးစက်မှု ဖြစ်ပွားပြီးရက်အနည်းငယ် (သီတင်းပတ် အနည်းငယ်) တွင် ဖြစ်ပွားတတ်ပါသည်။ တစ်ခါတစ်ရံခွဲစိတ်မှုပြုလုပ်ခြင်း နှင့် ဆေးထိုးခြင်းတို့သည် ဤရောဂါကို ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။
Guillain Barre Syndrome (ကြွက်သားအားနည်းပျော့ခွေသော ရောဂါစု) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာတွေက မြင့်တက်စေသလဲ
Guillainbarresyndromeကိုဖြစ်ပွားနိုင်ချေမြင့်စေသည့် အကြောင်းရင်းများများစွာရှိပါသည်။ ဥပမာ-
အသက်အရွယ် ၊ အသက်ကြီးသူများသည် ရောဂါပို၍ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
လိင် ။ အမျိုးသားများတွင် အမျိုးသမီးများထက် ပို၍ ဖြစ်ပွားပါသည်။
တုတ်ကွေး၊ အစာအိမ်ရောဂါ နှင့် အဆုတ်ရောင်ရောဂါ စသောအသက်ရှူလမ်းကြောင်း နှင့် အစာခြေလမ်းကြောင်း နှင့်ဆိုင်သောရောဂါများ
ခွဲစိတ်မှု သို့မဟုတ် ဆေးထိုး ပြီးနောက်
ဖြစ်ပွားစေနိုင်ချေကို မြင့်စေသည့် အကြောင်းရင်းများမရှိခြင်းသည် သင့်အားရောဂါမရနိုင်ဟုမဆိုလိုပေ။ ဤအချက်များသည် ကိုးကားချက်များသာလျှင်ဖြစ်သည်။ ပိုမိုများပြားသောအချက်အလက် များအတွက် သင်၏ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ပါ။
Guillain Barre Syndrome (ကြွက်သားအားနည်းပျော့ခွေသော ရောဂါစု) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
ဆရာဝန်သည် ဆေးမှတ်တမ်းနှင့် ဆေးပညာဆိုင်ရာစစ်ဆေးစမ်းသပ်မှု များအပေါ် မူတည်၍ ရောဂါ အဖြေရှာ နိုင်ပါသည်။ အခြားရောဂါများနှင့် ခွဲခြားရန် စမ်းသပ်မှုအချို့လုပ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ၎င်းတို့မှာ electromechanical meter (EMG), lumbar puncture tube (ကျောရိုးအရည်ယူရန်)၊အသက်ရှူစမ်းသပ်မှုများ နှင့် သွေးစမ်းသပ်မှုများပါဝင်ပါသည်။
Guillain Barre Syndrome (ကြွက်သားအားနည်းပျော့ခွေသော ရောဂါစု) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
Guillainbarre syndromeကုသမှုများသည် အဓိကအားဖြင့် နောက်ဆက်တွဲဖြစ်ပေါ်သည့် ဆိုးကျိုးများကိုကာကွယ်ပေး ပြီးရောဂါ လက္ခဏာများကိုလျော့ချကာရောဂါကိုကျော်လွှားစေရန် ဖြစ်ပါသည်။ ရောဂါအစပိုင်းတွင် ဆရာဝန်များသည် သွေးရည်ကြည်မှ ပဋိပစ္စည်းများကိုခွဲထွက်သော immunoglobulin အများအပြားကိုပေးသောကုသမှုများကိုအသုံးပြုကြပါသည်။
သွေးရည်ကြည်မှ ပဋိပစ္စည်းများကိုခွဲထုတ်သောကုသမှုတွင် သွေးဖြူဥများနှင့် သွေးနီဥများသည် သွေးရည်ကြည်မှ ခွဲထုတ်ခြင်းခံရပါသည်။ နောက်ဆုံးတွင် သွေးရည်ကြည် မပါသောသွေးဆဲလ်များကို ခန္ဓါကိုယ်သို့ ပြန်သွင်းလိုက်ပါသည်။
Immunoglobulin အများအပြားပေးခြင်းတွင် ဆရာဝန်သည် ပရိုတိန်း ( ရောဂါပိုးများကိုတိုက်ခိုက်သောကိုယ်ခံအားပစ္စည်း) များကိုသွေးကြောထဲသို့ ထိုးသွင်းပေးပါသည်။
လူနေမှုပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးတွေအသုံးပြုခြင်းကGuillainbarre syndromeကိုကုသရာမှာဘယ်လိုအထောက်အကူပြုနိုင်မလဲ။
ဆရာဝန် ညွှန်ကြားချက်များကိုလိုက်နာပါ။ ညွှန်ကြားမထားသောဆေးများအသုံးမပြုပါနှင့်။ ဆရာဝန် ခွင့်ပြုချက် မရှိဘဲဆေးသောက်ခြင်းကိုမရပ်ပါနှင့်။
ရောဂါလက္ခဏာများတိုးတက်လာမှု နှင့် သင့်၏ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုထိန်းချုပ်ရန် ဆရာဝန်နှင့် ပြန်လည်ပြသခြင်းကိုအစီစဉ်တကျ ပြုလုပ်ပါ။
အကယ်၍သင့်မှာမေးခွန်းတွေရှိပါကသင့်အတွက်သင့်တော်တဲ့ အဖြေရှာဖွေနိုင်ရန် ဆရာဝန်နဲ့ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်သင့်ပါသည်။
Porter, R. S., Kaplan, J. L., Homeier, B. P., & Albert, R. K. (2009). The Merck manual
home health handbook. Whitehouse Station, NJ, Merck Research Laboratories. Print
edition. Page 828
Guillain-Barré syndromehttp://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/guillain-barre-syndrome/basics/definition/con- 20025832. Accessed Jul 15 2016
Guillain-Barré syndromehttps://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/000684.htm.Accessed Jul 15 2016